နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: September 2009
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:08 AM 22 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Irish College ကို ဝင်ဖို့အတွက် ဖြေရတဲ့ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ Entrance Exam လို့ သိရပါတယ်။
ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထားပါ။
မိမိတို့ရဲ့ IQ ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
(အဖြေကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ...။)
အီးမေးလ်က ရပါတယ်။ ညီမလေး နန္ဒကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:09 AM 11 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီပုံလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ၉ သုံးလုံးအမှတ်တရ ထပ်တင်သည်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:38 PM 13 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
စမ်းသပ်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဗားရှင်းတုန်းက စမ်းနေတာ အောင်မြင်မှု မရသေးပါ။
အခုပို့စ်တော့ တက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ကိုရီးယား မင်းသမီးလေးပါ။ နာမည်က Jyun Ji Hyun တဲ့။ ဝီကီမှာ သူ့အကြောင်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Korea က နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ My Sassy Girl (US က ဒီနာမည်နဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတယ်။), Il Mare (Lake House ဆိုပြီး ကီနူးရိဗ်၊ ဆန်ဒရာ ဘူးလ်လော့ခ်နဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတယ်။ ) ထဲက အဓိက ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးလေး။ ချစ်စရာလေး။
အောက်က ယူထုတွေက သူပါတဲ့ ကြော်ငြာတွေ...။
ဒါက ဂျင်းကြော်ငြာတဲ့။ ကျော်သန်းဦး ဂျင်းကြော်ငြာဆိုပဲ။
ဒါက ကေအက်ဖ်စီ ကြော်ငြာ KFC
ဘာကြော်ငြာလဲတော့ မသိဘူး။ အဖြူအမည်းနဲ့။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:09 AM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဒီလိုနဲ့ စံပါယ်ဖြူတွေတောင် ပွင့်သွားတာ လေးရာသီမြောက်ပေါ့။
တောင်ခိုးတွေ ဝေသီနေတဲ့ မြင်ကွင်း
ပွင့်အန်ကျလာတဲ့ နံနက်ခင်း နေရောင်
လေတိုက်တိုင်း မြည်နေတဲ့ ဆည်းလည်းသံ
ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားရတတ်တဲ့ ချာ့ခ်ျကျောင်းက ခေါင်းလောင်းထိုးသံ
မာနတွေ တစ်ထွေးကြီး ခံနေတဲ့၊ ဖန်ပေါင်းချောင် အလင်းကို သဘာဝ အလင်းလို့ ထင်မှတ်မှားနေတဲ့ ညီမလေးကို လွမ်းတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:58 PM 15 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
1. Superman စီးရီးစ်အားလုံး
2. Spiderman စီးရီးစ်အားလုံး (Spiderman 1,2 Original DVD ရှိပြီး။3လိုသေးသည်။)
3. X-Man စီးရီးစ်အားလုံး
4. Batman စီးရီးစ်အားလုံး
5. Lord of The Ring စီးရီးစ်အားလုံး
6. Harry Porter စီးရီးစ်အားလုံး
7. Iron Man 1 (Original DVD ရှိပြီး)
8. Toy Story စီးရီးစ်အားလုံး
9. Snow White and Seven Dwarfs
12. Da Vinci Code (Original DVD ရှိပြီး)
16. Star Wars စီးရီးစ်အားလုံး
17. Michael Jackson MoonWalk MTV
18. BBC Documentary
19. National Geographic Events
20. The Mummies စီးရီးစ်အားလုံး
21. National Treasure စီးရီးစ်အားလုံး
22. Nightmare On The Elm Street စီးရီးစ်အားလုံး
23. The Friday The 13th စီးရီးစ်အားလုံး
25. Ice Age စီးရီးစ်အားလုံး (1,2 Original DVD ရှိပြီး)
26. Man In Black စီးရီးစ်အားလုံး
27. Mission Impossible စီးရီးစ်အားလုံး (MI:1,2 Original DVD ရှိပြီး)
28. Bourne (Identity, etc) စီးရီးစ်အားလုံး
29. The Antz ကာတွန်းကား
30. Godzilla (New Version)
31. King Kong (New Version)
32. James Bond (Prefer more on Sean, Peierce Brosnan)
34. Lay Phyu's MTVs (Must have : BOB)
35. iRobot (Original DVD ရှိပြီး)
36. Independence Day (Original DVD ရှိပြီး)
37. AI (Artificial Intelligence)
38. Hero (Jet Li)
39. Face Off
40. Transformers 1 (Original DVD ရှိပြီး)
42. Fantastic4(1,2 Original DVD ရှိပြီး)
43. Minority Report (Original DVD ရှိပြီး)
44. Transporter (1,2 Original DVD ရှိပြီး)
45. Broken Arrow (Original DVD ရှိပြီး)
46. Air Supply : Live In Canada (Original DVD ရှိပြီး)
47. Eagles : Hell Freezes Over (Original DVD ရှိပြီး)
48. Documentary : From The Earth To The Moon (Original DVD ရှိပြီး။ ၅ချပ်တွဲ)
Updated as of : 070909
လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲ တင်ထားမယ်။ နောက်မှ update ပြန်လာလုပ်မယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ဗွီစီဒီပဲ ရှိတယ်။ ခု ဒီဗွီဒီပေါ်လာတော့ ဝယ်မသိမ်းထားမိဘူး။ တရုတ်က ဝင်လာတဲ့ ခွေတွေက ကာဗာသာ မကောင်းတာ။ Digital to Digital ကူးထားတာဆိုတော့ မူရင်းခွေကနေ ကူးထားရင် ကွာလတီ မကျဘူး။ ဒီမှာက တစ်ချို့ခွေတွေဆို ဝယ်လို့ မရတော့ဘူး။ ရန်ကုန်ကတော့ ဘယ်အချိန်ဝယ်ဝယ် ရှိနေတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:09 AM 24 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ငယ်ငယ်က ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရင်း ကြယ်တွေ ကြွေနေတာ မြင်တော့ ကြယ်ဘယ်နှစ်လုံး ကျန်နေပါလိမ့်လို့ ရေတွက်မိတယ်။ အဒေါ်က မြင်တော့ ကြယ်တွေ ကုန်အောင် မရေနိုင်ရင် ဆံပင်တွေ ဖြူလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ တစ်ညလုံး နှင်းတောထဲ တိတ်တိတ်ထိုင်ပြီး ကြယ်တွေ ရေတွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးညှင်းသံဗုဒ္ဓေ ဘုရားထဲက ကျောက်စာတွေကို လိုက်ဖတ်တော့ အကုန်မဖတ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ ပါဠိတွေကို ဖတ်တတ် မဖတ်တတ်နဲ့ ပြီးအောင် ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ သူများတကာတွေ ဘုရားကို သုံးလေးပတ် ပတ်ပြီးနေပြီ .. ကိုယ်က ပြီးအောင် ဖတ်ဖို့ ကြိုးစားတုန်း။
မိုးရွာပြီးစ သက်တန့်ကြီး ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပေါ်လာတာကို လက်ညိုးထိုးမိရင် လက်နူတတ်တယ်တဲ့။ ထိုးမိခဲ့လို့ရှိရင် လက်မနူအောင် ဖင်ပြန်နှိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ အတွေးအခေါ်ကို ဘယ်ပညာရှိကျော် ကလေးက တွေးခဲ့လဲ မသိဘူး။ ကိုယ့်မှာ လက်နံတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်။
မိုးရွာနေတုန်း နေထွက်လာတာနဲ့ ကြုံရင် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ သံပေါက်လေး ဆိုကြတယ်။ နေပူမိုးရွာ၊ သူခိုးလာ၊ လာတဲ့ သူခိုး လှံနဲ့ထိုး၊ ထိုးလိုက် ထိုးလိုက် ဗထက်ချိုက်၊ ဗထက်ချိုက် ချော်လဲ နငယ် နှာခေါင်းပြဲ တဲ့။
အင်အင်းပါနေတဲ့ ခွေးမြင်ရင် တန်းလန်း ဖြစ်နေတုန်း လက်ညိုးနှစ်ချောင်းကို အချင်းချင်း ကွေးပြီးချိတ်တဲ့။ ချိတ်စရာ မရှိရင် ကိုယ့်လက်ညိုးချင်းချင်းကိုပဲ ချိတ်တဲ့။ အင်အင်းပါနေတဲ့ခွေး က ချေး တစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ဘာလို့ တစ်အောင် လုပ်တာပါလိမ့်...။ ဧကန္တတော့ အိမ်ရှေ့မှာ ခွေးချေးမကျန်စေချင်လို့ ထင်ပါ့။
ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းချင်း မခေါ်ဘူးဆိုရင် ထိပ်နှစ်ဘက် ထိပြီး ကွေးထားတဲ့ လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကြားကို မခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်က လက်ညိုးလေးနဲ့ ဆွဲဖြုတ်ရတယ်။ ဒါဆို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မခေါ်တော့ဘူးပေါ့။ ပြန်ခေါ်ချင်ရင် ခုနက ကွေးထားတဲ့ လက်ညိုးနှစ်ချောင်းကို ပြန်ဖိပေးလိုက်ရင် ကျေအေးရောတဲ့။
ကိုယ့်ပစ္စည်းကို မတရားသဖြင့် ယူသွားရင် အဲဒီ ပစ္စည်းကို ခြေထောက်ကြားထဲကနေ သုံးကြိမ်သုံးခါ အသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်ပြီး နူပါစေ လို့ ကျိန်တတ်တာကို သတိရတယ်။
ခွေးနဲ့ အရူးဟာ ကလေးတွေရဲ့ ကမ္ဘာ့ရန်ဆိုတာ ခုထိ မှတ်မိနေတုန်း။
စက်ဘီးစီးသင်တော့ နောက်ကနေ အဒေါ်က လိုက်ထိန်းတာ။ တစ်ရက်တော့ အဒေါ်က ထိန်းပေးနေရင်း လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ်က သူထိန်းပေးနေတုန်း ထင်ပြီး စီးနေရင်းနဲ့ သူ့လှမ်းလှမ်း စကားပြောတာ။ ကြာတော့ စကားမပြန်လို့ မသင်္ကာလို့ ကြည့်တော့ သူက နောက်နား ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကျန်နေခဲ့ရော။ အဲဒီမှာတင် လန့်ဖျတ်ပြီး စက်ဘီးလဲ ဒူးကွဲ အာပြဲနဲ့ အော်ငိုပါရောလား...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:37 PM 14 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ချစ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ....
မုန်းလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ....
စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ကျန်ရစ်သူမှာ အလွမ်းတွေ စာဖွဲ့လို့ မကုန်နိုင်ပါဘူး။
ဒီလို စာတွေ ကဗျာတွေ ဖွဲ့ရာကနေ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အလွမ်းအဆွေး သီချင်းတွေ အများကြီး ကြားဖူးမှာပေါ့။
အခုလဲ အဟောင်းတွေထဲက ပြန်တူးဆွပြီး နားထောင်ဖြစ်တဲ့ အစွန့်ပစ်ခံသူတစ်ယောက်ရဲ့ အလွမ်း သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။ အစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ တစ်ယောက်က အကြောင်းရင်းကို လိုက်ရှာနေပုံလေးကို ခံစားတင်ပြထားတာပါ။
ပထမဆုံး ကြားဖြစ်တာကတော့ အမျိုးသား အဆိုရှင် Arisman ပါ။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်လောက်ဆီက ဆိုတဲ့ သီချင်း ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ မသေချာပါ။ ဒီ့ထက် စောချင် စောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Arisman ဆိုတာ အရင်က သီချင်းချိုအေးအေးများကို သီဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းများဆီက ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္ထယားမြို့မှာ အာဆီယံ အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန်မှာ ဆန္ဒပြတဲ့ အနီဝတ်များကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူ၊ အဲဒီအတွက် အဖမ်းဆီးခံရပြီး အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်လာတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို ထောက်ခံသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ သူဆိုထားတဲ့ မူရင်း သီချင်းကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်က “Ting ထင့်” အစွန့်ပစ်ခံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသီချင်းဟာ အရစ်စမန်း သီဆိုချိန်မှာ အလွန်ပင် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူက ခံစားချက်နဲ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ အတွက် သီချင်းဟာ အတော် အသက်ဝင်ပါတယ်။ တော်ရုံအဆိုရှင်များ လက်ရှောင်တဲ့ သီချင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း နှစ်များမှာတော့ ဝါရင့် အမျိုးသမီး အဆိုရှင် မဲန်မ် က ထပ်မံ သီဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူလဲ သီချင်းကဝေ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အဆိုတော် မေဆွိတို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူသီဆိုတာကို တစ်လှည့် နားဆင်ကြပါစို့...။
Arisman ဆိုထားတဲ့ ယူထု မှာ ဝါရင့် သမ္ဘာရင့် အဆိုတော်တွေ (ရိန်းဘိုး၊မဲန်..) အကုန်ပါတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီး အဆိုရှင်လဲ တွေ့ရပါမယ်။ သူကတော့ ဒီသီချင်းကို ပြန်ဆိုတဲ့ မဲန်မ်ပါပဲ။
Youtube ဖွင့်မရသူများအတွက် mp3 link ကိုလဲ တင်ထားပေးပါတယ်။
ทิ้ง - Artist
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:28 AM4ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Irish College ဝင်ခွင့်အတွက် အဖြေမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:46 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
နောင်တစ်ချိန် အိုမင်းမစွမ်းချိန်၌ အမှတ်ရစေခြင်းငှာ။
ယောကျာ်းလေးတွေအတွက် တစ်သက်မှာ သုံးခါ ပျော်ရတယ်တဲ့။ ရှင်လိင်ပြန်တဲ့နေ့၊ ထောင်ကထွက်တဲ့နေ့၊ နောက်တစ်နေ့က ဘာလဲတော့ မသိဘူး မေ့သွားပြီ။
မိန်းကလေးများအတွက်ကတော့ ပထမဦးဆုံး မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ နေ့ဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ကြိမ်တည်းသော အပျော်ဆုံးနေ့ပါတဲ့။
ဒီကောက်ချက်ကို ကြည့်ရရင် မိန်းကလေးများက ယောကျာ်းလေးများလောက် အပျော်ဆိုတာကို မခံစားတတ်ဘူးလို့ ထင်ရသလိုပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ သေချာ ပြန်တွေးရင် မိန်းကလေး ရှင်လိင်ပြန်တယ်ဆိုတာ ရှိမှ မရှိတာနော့...။
ဒါ့ကြောင့် ရှင်လိင်ပြန်တဲ့ အပျော်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေအတွက် အကျုံး မဝင်ဘူးပေါ့။
ထောင်ကထွက်တဲ့နေ့ ပျော်ရအောင်ဆိုတာလဲ မိန်းကလေးအများစုက မိုက်မိုက်ကန်းကန်း မရှိကြလေတော့ ထောင်တန်းကျတယ်ဆိုတာ မရှိသလောင်ပါပဲ...။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ပျော်ရတဲ့ ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာ မိန်းကလေးတွေဟာ ဖြစ်နိုင်ရင် အမှတ်ရစရာ တစ်ခုအဖြစ် တစ်သက်တာ သိမ်းဆည်း အမှတ်ရစေချင်တယ်။ နောင်တစ်ချိန် အဖိုးကြီး ငါ့ကို အဖွားကြီးက မောင်တွေ ဘာတွေ ခေါ်ပါဦး ဘာညာ ရယ် ဖြစ်လာရင် တွေးတွေးပြီး ကြည်နူး အမှတ်ရနိုင်အောင် တစ်ခုခုတော့ ချန်ထားခဲ့ချင်ကြတာပဲ။
အောက်က ယူထုလေး ကြည့်ပြီးတော့ မင်္ဂလာဆောင်ချင်စိတ်လေးများ မပေါ်မိဘူးလား။
(Native Myanmar Forum မှာ Alive တင်ထားတာလေးကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ကြွလာ မိတ်သဟာများကိုပါ မျှဝေချင်မိလို့ တင်လိုက်တာပါ။)
Credit to : TheKheinz
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:37 PM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းများ ထပ်တူကျတာ ကြုံဖူးလား။
ရင်ဘတ်တူ မိတ်ဆွေများနဲ့ ရင်ခုန်သံ ကြိမ်နှုန်းတွေ ထပ်တူကျတာ ကြုံဖူးလား။
ညလေးတစ်ညမှာပေါ့။ သာနေတဲ့ လရောင်အောက်မှာ အပေါင်းအဖော်များနဲ့ သီချင်းလေး ညည်းနေရင်း...
မြရဲ့ညကို ခံစားနေရင်းနဲ့... သီချင်းလေးတွေနဲ့ စီးမျောနေကြတာပေါ့။
ဂီတာတီးပေးတဲ့ အတီးသမားက ကိုယ်တို့တွေထက် နည်းနည်း စီနီယာကျမယ် ထင်ပါရဲ့။
တီးတဲ့ သီချင်းတွေက အခုခေတ် ကလေးတွေ မသိတဲ့ သီချင်း။
ကိုယ်တွေ ခေတ်တုန်းက ပေါက်ခဲ့တဲ့ သီချင်း။
သူနဲ့ကတော့ အမြဲမဟုတ်တောင် တွေ့ဖူးနေကျ ဆိုတော့ သူတီးတတ်တဲ့ သီချင်းတွေ ကိုယ်ရတယ်။ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ သီချင်းတွေ သူတီးတတ်တယ်။
ကိုယ်တို့တွေ လုပ်နေတာက ဆိုရှယ် ဂဲသားရင်းဆိုတော့ အပေါင်းအဖေါ်မိတ်ဆွေ အသစ်များလဲ ပါတယ်လေ။
အဲဒီအထဲကမှ တစ်ယောက်သော သူကို သတိထားမိတယ်။
သူလဲ တို့လို သီချင်းကြိုက်တတ်သူပါလား။
နှစ်၂၀က တေးများ အထိ သူလိုက်ညည်းတတ်တယ်။
ကိုယ်တွေ ကြိုက်တတ်တဲ့ taste က သူ့taste နဲ့တူနေတယ်။
အင်္ဂလိပ်သီချင်း၊ မြန်မာ သီချင်း မိုနို စတီရီယို အကုန်ရတယ်။
မိန်းကလေးတွေထဲမှာ သီချင်းကို ဌာန်ကရိုဏ်းမှန်အောင်၊ စည်းနဲ့ဝါး မှန်အောင် ဆိုတတ်တာ အရှားသားကလား။
ဆိုတဲ့သူကလဲ ဆို၊ ပွဲတောင်းသူကလဲ တောင်းနဲ့ အဆိုနဲ့ အတီးက အပေးအယူမျှနေတယ်။
တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ခု Request လုပ်လိုက်တယ်။
အတီးသမားကို သီချင်းခေါင်းစဉ်ပြောပြတော့ သူ သိပ်မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဆိုပြမယ်ဆိုပြီး ဆိုတော့ အဲဒီ မိန်းကလေးက လိုက်ဆိုတယ်။
အဲဒီမှာ သူ့ကို ချီးကျူးမိသွားတယ်။
တော်ရုံ သီချင်း ကြိုက်တတ်သူတွေထက်ကို ပိုခံစားတတ်တဲ့ ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူကျတဲ့ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်တယ်။
ကျောင်းတုန်းက ဒီလို ရင်ခုန်သံခြင်း ထပ်တူကျတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက် တွေ့ဖူးတယ်။
သူလဲ ကိုယ်တွေလိုပဲ သီချင်းကောင်းလေးတွေ ကြိုက်တတ်တယ်။
ခုများတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်တောင် ရောက်နေလဲ မသိ။
အခုတော့ ကိုယ်လို ဟာမိုနီ ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက် ထပ်ရပြန်ပြီ။
(ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးက ဟင်္သာတို့ရဲ့ နန်းတော်ရှေ့လို့ အမည်ရတဲ့ လွမ်းမိုးရဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လို နိုင်တီးဂွမ်တီးက လူကလွဲရင် အဲဒီသီချင်းသိတဲ့သူ တော်တော်နည်းတယ်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:09 AM 23 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။